यस्तो मार्मिक स्टाटस लेखेर संसारबाट बिदा भए कमान सिं लामा « Sansar News
यस्तो मार्मिक स्टाटस लेखेर संसारबाट बिदा भए कमान सिं लामा
२५ मंसिर २०७७, बिहीबार ०८:१२
बुधबार राती निधन भएका वामपन्थि नेता तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कमानसिं लामाले निकै भावकु स्टाटस लेखका छन् । उनी अस्पतालमा उपचाररत रहँदै गर्दै शुभचिन्तकहरुले स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेका बेला लामाले अस्पतालबाटै डिसेम्बर ३ तारिखका दिन निकै मार्मिक स्टाटस लेखेका थिए। स्टाटसमा उनले आमालाई सम्झँदै श्रीमतीसँगको सम्बधलाई लिएर बढी नै आक्रोश र दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले श्रीमती र भाइलाई आफ्नो काजक्रियामा समेत सामेल नहुनु भनेका छन् ।
यस्तो छ अन्तिम स्टाटस :
आमा नामनै कति मोहक शब्द ‘आमा’ मैले संसारमा सब भन्दा बढी मया गर्ने ‘आमा’। ‘आमा नामनै कति मोहक शब्द ‘आमा’ मैले संसारमा सब भन्दा बढी मया गर्ने ‘आमा’ ।
प्रीय मैले तिमीलाई त्यही आमा पछिको दोश्रो माया गरेको थिएं तर त्यो आज याम्बालिंग रुपी बर्मुडा ट्रयाङगलमा फसेको छ । तीमि यसलाई सामान्य लोग्नी स्वस्नीको झगडाको रूपमा लिंदै आफ्नो स्वास्नी आफैले हात लिन सक्नु पर्छ भन्नछन । छ्या कति कुरुप सिलावरको देक्ची कूचिैएका कुरुप विचार र अनुहार बोकेका तिम्रा जिग्री दोस्तहरु ।
।प्रिय, तिमीत उस्को परिवार रे आफ्नो श्रीमतीलाई आफैले हात लिनु पर्छ रे !!! वा रे वा नेताज्यू हातमा हैन मैले सिरमा राखेको थिएं ।ढोंगीहरुलेत हातमा भनेर घुंडामा झुण्ड्याउने हो क्यार । जे होस तिम्रा जाल झेल खेती सप्रेकोनैछ साधा जीबन उच्च विचारका होर्दिड०बोर्ड बगैंचा घरका भित्तामा टांसेकाछौ त्यो कत्तिको सहज लाग्छ कुन्नी मलाई त हांडि घोप्टे जस्तो लाग्छ ।
ठमेलमा ५० हजार यु एस डलरको विटा भेट्टाएछ १११ सोह्रखुट्टे पार्टिको भित्तामा गाइको गोवरले डलर टांसेर झिली मिली बनाएछ १११ हांडिमा खिचडि बसाएर दूइ बुढाबुढि गीत गाएर नाचिबसेको खोजदै जाने प्रहरी र टुरिष्टले भेटेछ ।यहि केशले हांडि घोप्टेको लोग्ने स्वास्नीको यूरोप अमेरिकाको यात्रा भयो ।
हाम्रा महान नेपाका माहान साधु सन्त नेताका यत्तिको नैतिक्ता र वीचार पनि मैले देखिन !!! थुई.. क्क जाली फटाहा द्रव्य पिशाचहरु !!!
प्रीय मेरी प्रिय हाम्रो प्रेम बर्मुडा ट्य्राण्गलमा फस्यो प्रीय ।
१। मेरो DIGNITY स्वाभिमानको ट्य्राङ्गल ।
२। चल अचल भौतिक सम्पती प्रतिको तिम्रो आसक्ती ।
३। हाम्रो वीचको सामाजीक सम्बन्ध , स्थापित मूल्य मान्यता र त्यसमा आएको परिबर्तनले ल्याएका अन्तर बिरोधहरु।
यो हो हाम्रो वीचको अहिलेको बर्मूडाको ट्य्राङगल ।
याद गर प्रीय मैले तिमीलाई सबै कुरो सम्पती सम्म सुम्पें तर मेरो स्वाभिमान प्रति खेलवाड गर्ने छुट दिईएको छैन । धेरैले नबुझेका र तिमीले पनि नवुझेको कुरो यहि छ।
बरमुडा ट्य्राङगल त्यो त्रासदिपूर्ण आजसम्म त्यसको भेद खोल्न सकेको छैन । तर यसको बनावट भूमध्य रेखा काल्पनीक लाइन संगै भएको हो । जब प्रथ्वी एउटै ढिक्कोको एउटै समुन्द्र थियो। हामी बसेको भू भाग गोण्डावना ल्याण्डसंगै दक्षिणी धुर्बमा टांसिएर बसेको थियो ।
त्यसबखत ठुला ठुला भौगोलिक उथल पुथल भइरहन्थे। एक्कास्सी गोण्डावना ल्याण्ड दक्षिणी धुर्बसंग छुट्टियो । ३ मिटर उत्तर सर्यो । प्रथ्वी बीचमा उसिनेको अण्डा वीचमा फ़ुटाएको जस्तो फुट्यो। प्रथ्वी दुइ भागमा बांडियो । उत्तरी गोलार्द पांगिया र दक्षिणी गोलार्ध गोण्डावना ल्याण्ड । यहि घटनामा भूमध्य रेखिय क्षत्रमा बर्मुडा ट्रयाडङगल बन्यो । त्यो आजपर्यन्त अभेद्य छ। त्यस्तै हामी हाम्रो बर्मुडा ट्रयाड०गलमा फसेका छौं ।
तिमीले कुरा नबुझ्दा र तिमीले जानी जानी धोका दिंदा मेरा केही सपनाहरु अधुरानै रहने भए। राजनीतिक सपना राजनीतिक नेताहरुले गोलखाडि पुर्याइ हाले ।के कुरा गर्ने !
तिमी म दुइ मिली यो प्रथ्वी फनक्क एक फन्को लगाउने। विस्वका आठै वटा आश्चर्यको रस्वास्वादन गर्ने । माचिपिच्यूमा पुरानो पोर्तुगीज खाना खाने। गोन्जालोको देश हेर्ने । माकलबारीमा आफ्नै पिरामिड बनाउने पोहोरै योजना बनाएको थिएं । त्यो तिमीले भांडी दियौ ।
मध्यरातमा घाम झुल्किएको फिन्ल्याण्ड, नर्वेवाट रस्वास्वदन हामीदुइ साथै गर्ने सपना अधुरै रहने भयो ।
ट्रान्स साइबेरियन ट्रेन चढेर व्लादिभोस्तक जाने ! उलान बटोर र ऐतिहासीक गोवि मरुभूमीमा उंट चढने सपना अधुरै रहने भयो ।
मानव विकासक्रमको २૪ लाख बर्षको ईतिहासमा सिन्थोपस प्रक्रितीको जीवाष्मका मूलका मानिसहरू ड्रागन पाहाड भिरालोका मानिसहरु पेकिङम्यान, लान्तीयान म्यान, वुसानम्यान ले गरेका उपलब्धी र आदीबारे अलि शुक्ष्म अध्यन गरी हाम्रो ठुंसाका बारे भौतिक रूपमै उपस्थित भएर अध्ययन गर्ने ।
दोङसिङदान तथा धेरै हामी टिवेटो बर्मिज भाषा समुह र मंगोल मूलका पुर्खाहरुले एक ठुलो नदीको धार परिबर्तन गरि अहिलेको साइन्स र टेक्नोलोजीको युगमा पनि आस्चर्य चकित हुने हाम्रा प्राग कालिन पुर्खाको पौरख र शीप विज्ञान प्रविधि संगै पढने ईच्छा अधुरै रहने भयो ।
हाम्रो सास्त्रले भनेको वुइसाङ, उर्गेन ह्युल, अब आउने बसन्त रितुमा अध्यनभ्रमणको रूपमा डुल्ने योजना थियो त्यो अधुरै रह्यो ।
प्रीय म कोरोनाले लिएर जानको लागी सबै योग्यता पुगेको मान्छे म अरुले भने म्रित्यु शैयाबाट भन्थे होला तर म भन्दिन । कोबिटसंग पैंठे जोडि खेल्दैछु । सायद म बाच्छु पनि होला मेरा वरपरबाट धेरै गए पनि । तर म आत्तिनन् ।
यो अन्तीम घडिमा पनि मेरो धन मेरो लागी काम लाग्दैन भने त्यो धनको के काम । आफ्नो पाउनु पर्नेत यो हालतमा दिंदैन भने मेरो निम्ती कहिलेलाई चाहियो ?
यो जीवनको जीवन मरणको लडाईको वेला मेरो श्रीमती म साथ हुन्न भने त्यो श्रीमती अझै श्रीमती भनिरहनु कत्तिको औचित्य ? लौ प्रिय गरि खान मनग्य गरि दिएको छु । बांकी जीवन मोज गर । मैले पुरा गर्म नसकेको अधुरा काम अरुसंगै पुरा गर । आठै आस्वर्य हेर्ने घुम्ने भोक मैलेनै जगाइ सकेको छु तिमी सक्षम पनि छौ । लौ बधाई प्रीय ।
२८/३० बर्ष तिमी साथै यो ६/७ महिना बाहेक ज्यादै शुखद नै रह्यो । यो ६/७ महिनाले मलाई गलायो किनकी मैले तिम्रो मायामा विस्वास घात पाएं ।
मेरो सेयरको करीब दूइ बर्षको सांवा ब्याज मेरो खातामा जम्मा गरेर आइज कुरो सहजै मिल्यो । उस्ले पैसा नदिए सिधै म संग मिल्न आइज हामी दुई भएर मुद्दा लडौं या रिजनब्ली मिल्न आए मिल्ने ।
प्रीय यदि तिमी जालीफटाहाकै पक्षमा लागिनै रहने हो भने मेरो र तिम्रो बीचको सम्बन्ध मेरो यस्तो बेलामा पनि तिम्रो साथ मलाइ रहन्न भने।सम्बन्ध छ भनिरहनुको औचित्यै के रह्यो र प्रीय ।
कुनै माध्यमले काम नगरे पछि बडो सरमका साथ यो मिडिया अपनाएं माफ गर प्रीय ! यदि म कथं म मरे मेरो काजक्रियामा तिमी र मेरो भाई इमान सामेल नहुनु ! यो मेरो बिन्ती ।